Global Voices teny Malagasy » Kyrgyzstan: Oniversite Sangany, Ivon’ny Adihevitrin’ny Parlemanta. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Marsa 2018 6:59 GMT 1	 · Mpanoratra Asel Nandika Ntsoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Politika
Nandritra ny herinandro lasa teo, ny tranga momba ny Oniversite Amerikanina ao Azia Afovoany no lohahevitra tena noresahan'ireo blaogera Kyrgyz indrindra. Araka ny voalazan'ny tranonkalany , manana laza mipetraka ho an'ny “fanolorantena ho an'ny soatoavina demokrasia, ny fahalalahan'ny tsirairay ary ny fanahin'ny fanavaozana” ny AUCA, ary, mazava ho azy fa nanana anjara asa nanan-danja tamin'ny sehatrin'ny fanabeazana teo amin'ny faritra izy ary nivoatra ho iray anisan'ny mpitarika amin'ny sehatrin'ny fampianarana ambony ao Azia Afovoany.
Na izany aza, tamin'ny 15 Febroary, namoaka  ny olana momba ny toerana misy ny AUCA ny solombavambahoaka Jogorku Kenesh [Parlemanta], i Ishak Masaliev, ary nanome kaomisiona iray ho an'ny Ministeran'ny Fanabeazana sy ny Kolontsaina Kyrgyz mba handinika ny olany.
Nahatonga adihevitra mafana tao amin'ny tontolon'ny bilaogy izany fanambarana izany. Nanamarika  i Ibragim avy ao amin'ny Nomadistan hoe:
Naneho ny heviny ihany koa  i Kanykei, mpianatra iray ao amin'ny AUCA:
Manameloka  an'i Masaliev, solombavambahoaka efa lany andro, i Tuliprevolution :
Miteny[ros]  i Anonymous avy ao amin'ny bilaogy Akipress iray:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/18/116413/
 Araka ny voalazan'ny tranonkalany: http://auca.kg/en/about_auca/history